Xildhibaan Hore C/naasir Gaarane iyo Taliye Fanax Oo Ka Mid noqday in ka badan 10 Qof oo ku geeriyooday Weerarkii Naasahablood. – Hornafrik Media Network
in ka badan 1o Qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyootay Weerarkii Hotel Naasahablood, Tiro intaa ka badana ay ku dhaawacmeen.
HornAfrik ayaa ogaatay in Dadka dhintay uu ka mid yahay Xildhibaan Hore, C/naasir Gaarane oo hadda ka mid ahaa Guddiga Taakulaynta Ciidamadda, Taliyaha Saldhiga Booliska Booliska Dayniile, Maxamed Yuusuf Nuur oo loo yaqaanayFanax Xagaleey iyo Masuuliyiin kale, Waxaa sidoo kala la baadigoobayaa Masuuliyiin kale oo aan illaa iyo hadda la xaqiijin karin inay dhinteen iyo in kale.
Ciidamadda Ammaanka ayaa hadda Dhabarka dambe ka soo galay Hotel Naasahablood 2, Waxaana la maqlayaa rasaas.
Maydad aad u gubtay iyo Kuwa googa’ay ayaa laga qaaday inta u dhaxaysa Hoteelka la weeraray iyo Maqaayadda Banooda oo iska soo hor jeeda, Waxaana goobta ay wax ka dhaceen adag in dadka caadiga ah ay galaan, iyadoona la arkayay dad dhooban Tiyaatarka Qaranka oo raadinaya Eheladooda oo ay tuhmayaan inay meesha ku jireen, ama wadada marayeen.
Gawaaridda Gurmadka Deg Dega ah ee Ambalaasyadda ayaa daabulaya Dhaawacyadda.
Weerarkan ayaa imaanaya 2 Toddobaad kadib weerar lagu halaagsamay oo ka dhacay Isgoyska Soobe, Mana jirto cid xilka ku waysay Weerarkaasi, iyadoo waliba Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Gen C/xakiin Saacid uu Dalka ka maqan yahay illaa iyo hadda, halka Taliyaha NISA, C/laahi Sanbaloolshe-na uu Masuuliyadda dusha ka saaray Beesha Caalamka oo uu ku eedeeyay inaysan ka taageerin Qalabka wax lagu baaro.